Awood - Gpedia, Your Encyclopedia
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qodobkaan, eeg Awood.
Awood (ingiriis: Force) waa astaamaha kartida shay leeyahay. Guud ahaan awooda waxaa loo qaybiyaa Awood Socota (kinetic Force) iyo Awood Kaydsan] (potential energy), laakiin intaas uun kuma koobna ee waxaa jira noocyo badan oo awood ah, sida: Awooda Korontada, Awooda Codka, Awooda Ileyska, Awooda Kulka, Awooda Cufisjiidadka, Awooda Falgalayasha iyo kuwo kale oo badan.
Shey kasta oo leh cuf taagan (rest mass) wuxuu la mid yahay awood taagan (rest energy) waxaana lagu xisaabin karaa qaacidada saynisyahanka Albert Einstein's E = mc2.
Dhinaca kale, noolaha dhamaantiis wuxuu u baahan yahay awood diyaar ah si uu u noolaado; bani-aadamku wuxuu ka helaa awooda cuntada taas oo la falgasha Ogsajiin. Sidoo kale, ilbaxnimo ama xadaarad kasta waxay u baahan tahay illo awoodeed, sida Kheyraadka Dabiiciga ah ee shidaalka, saliida, dhuxul dhagaxa ka midka yahay.
Meerahan aan ku nool nahay ee dhulka wuxuu awooda inta ugu badan ka helaa Qoraxda qaab iftiin ama ileys ah.
1 Jaadyada Awooda
2 Isku-bedelka Awooda
3 Sharciga Awooda
4 Qiyaasta Awooda
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Awood&oldid=156703"